फाइजर खोप आए भण्डारण चुनौती | Nagarik News - Nepal Republic Media
नेपालले १२ वर्ष उमेरमाथिकालाई दिन मिल्ने फाइजरको खोप ल्याउन खोजे पनि भण्डारण कक्ष अभाव रहेको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। अमेरिकाले कोभ्याक्समार्फत अक्टोबरभित्र फाइजरको एक लाख डोज खोप दिने भएको छ। त्यस्तै सरकारले डिसेम्बरभित्र थप ४० लाख डोज खरिद गरी ल्याउन उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको महाशाखाले जनाएको छ। नेपाल सरकारले अक्टोबरभित्र एकतिहाइ जनतालाई खोप दिइसक्ने जनाएको छ।
फाइजरको खोपका लागि भण्डारण कक्षमात्र नभई त्यसको सञ्चालन गर्न तालिमप्राप्त जनशक्ति आवश्यक पर्छ। सो खोप राख्ने फ्रिज खरिद गर्दा महँगो पर्छ। यस्तो अवस्थामा अन्य खोपको तुलनामा फाइजरको खोप महँगो पर्ने देखिएको कोभिड १९ विरुद्धको खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उपे्रतीले बताए।
सरकारले फाइजरको खोप खरिद सम्झौता विश्व स्वास्थ्य संगठनको खोप प्राथमिकताभन्दा अघि नै गरेकाले महँगो पर्न जाने देखिन्छ। अमेरिकाबाटै खरिदमार्फत आउन लागेको मोडर्नाको खोपभन्दा फाइजर खोपको प्रभावकारिता १ प्रतिशत मात्र बढी भएकाले महँगो खोप किन्नु उचित नभएको डा. उपे्रतीको भनाइ छ। खोप भण्डारण र व्यवस्थापन दुवै हिसाबले फाइजरको खोप नेपालका लागि अनुकूल नभएको उनले बताए।
संक्रमणदर १८ प्रतिशत
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणदर १८ प्रतिशत छ। पिसिआर विधिबाट परीक्षण भएका ८ हजार ७ सय ५२ नमुनामध्ये १५ सय ७७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पिसिआर र एन्टिजेन दुवै विधिबाट ११ हजार १ सय १७ नमुना परीक्षण गर्दा २ हजार ६५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो हिसाबले भने संक्रमणदर १५.७ प्रतिशत हुन्छ। थपसहित नेपालमा कुल संक्रमित संख्या ८ लाख ३८ हजार ९ सय ४८ पुगेको छ।
हाल मुलुकभरि ३४ हजार ६ सय ७६ जना सक्रिय संक्रमित छन्। जसमध्ये २ हजार ९ सय २३ जनाको संस्थागत आइसोलेसन र २ सय २२ जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा थप २५ जनाको मृत्यु भएको छ। योसहित नेपालमा कोरोनाबाट १० हजार ६ सय ६३ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ७ सय १५ जना संक्रमित भएका छन्।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७८ ०६:१९ शनिबार
अमेरिकाले कोभ्याक्स फाइजरको खोप भण्डारण स्थल